ISIKHATHI SOMUSA Archives - The Now Word
Isikhathi Sesihe Sivaliwe?
Posted on Mashi 18, 2021 Mashi 18, 2021 by Mark
KUPHELA “isikhathi somusa sivaliwe”, njengoba kushiwo kuleli sonto eledlule komunye wemiyalezo yaseZulwini? Uma kunjalo, kusho ukuthini lokhu?Qhubeka ukufunda →
Ubaba Wesihe Saphezulu
NGANGINAYO ubumnandi bokukhuluma noFr. Seraphim Michalenko, MIC eCalifornia emasontweni ambalwa eminyakeni eyisishiyagalombili edlule. Ngesikhathi sisemotweni, uFr. USeraphim wangitshela ukuthi kunesikhathi lapho idayari kaSt Faustina yayisengozini yokuvinjelwa ngokuphelele ngenxa yokuhumusha okungalungile. Ungene nokho, walungisa ukuhumusha, okuvule indlela yokuba kusatshalaliswe imibhalo yakhe. Ekugcineni waba yi-Vice Postulator ngokugcotshwa kwakhe.
IS kungenzeka ukuphula inhliziyo kaNkulunkulu? Ngingasho ukuthi kungenzeka uku bhoboza Inhliziyo yakhe. Siyake sikucabangele lokho? Noma sicabanga ngoNkulunkulu emkhulu kangaka, ongunaphakade, ongaphezu kwemisebenzi yabantu yesikhashana ebonakala ingabalulekile kangangoba imicabango yethu, amazwi, kanye nezenzo zethu kufihlwe Nguye?Qhubeka ukufunda →
Posted on Mashi 30, 2020 April 2, 2020 by Mark
KULUNGILE, Ngizokusho nje.
Awazi ukuthi kunzima kanjani ukubhala konke ukusho esikhaleni esincane kangako! Ngizama ngakho konke okusemandleni ukungakunqobi ngesikhathi esifanayo ngizama ukwethembeka emazwini esivuthayo enhliziyweni yami. Kwabaningi, uyaqonda ukuthi zibaluleke kangakanani lezi zikhathi. Awuyivuli le mibhalo bese ububula, “Ngikufunde kangakanani manje? ” (Noma kunjalo, ngizama konke okusemandleni ami ukugcina yonke into isondele.) Umqondisi wami wezomoya uthe muva nje, “Abafundi bakho bayakwethemba, Maka. Kepha udinga ukubethemba. ” Lowo bekungumzuzu obalulekile kimi ngoba sekuyisikhathi eside ngizwa lokhu kuxabana okumangazayo phakathi kokuba ukukubhalela, kodwa engafuni ukweqisa. Ngamanye amagama, ngithemba ukuthi ungaqhubeka! (Manje njengoba kungenzeka ube wedwa, unesikhathi esiningi kunanini ngaphambili, akunjalo?)
Posted on Mashi 28, 2020 Mashi 29, 2020 by Mark
LOKHU ntambama, ngiphume okokuqala ngqa ngemuva kokuvalelwa yedwa emasontweni amabili ukuze ngiye ukuvuma izono. Ngangena esontweni ngilandela ngemuva kompristi osemusha, inceku ethembekile, ezinikele. Ngingakwazi ukungena endaweni yokuvuma izono, ngaguqa endaweni yesikhulumi sokwenza amashifu, esethwe kumfuneko ye- "social-distancing". Mina noBaba sabuka ngamunye ngokungakholwa, bese ngibheka eTabernakele… ngaze ngakhala izinyembezi. Ngesikhathi ngivuma izono, angizange ngiyeke ukukhala. Izintandane ezivela kuJesu; izintandane ezivela kubapristi ngomuntu Christi… kodwa ngaphezu kwalokho, ngazizwa ezikaMama Wethu uthando olujulile nokukhathazeka kubapristi bayo noPapa.Qhubeka ukufunda →
Posted on Mashi 26, 2020 Mashi 27, 2020 by Mark
KUKHONA lapha! Isisetshenziswa esisha sha ukuthola iMilayezo Yezulu kulezi zikhathi ezinesiyaluyalu: NeziKhobOnline.com Qhubeka ukufunda →
Posted on Mashi 23, 2020 Mashi 24, 2020 by Mark
THE imimoya yesiphepho ingabhubhisa — kepha ingakhumula futhi ihlanze. Ngisho namanje, siyabona ukuthi uBaba usebenzisa kanjani ukuqhuma kokuqala kwalokhu Isivunguvungu Esikhulu kuya hlambulula, hlanza, futhi Lungiselela uMlobokazi kaKristu ka Ukuza kwakhe ukuhlala nokubusa kulo ngendlela entsha. Njengoba izinhlungu zokuqala zomsebenzi onzima ziqala ukungenela, vele, ukuvuka sekuqalile futhi imiphefumulo isiqala ukucabanga futhi ngenhloso yempilo nendawo okuyiwa kuyo ekugcineni. Kakade, iPhimbo loMalusi Omuhle, libiza izimvu zaKhe ezilahlekile, selizwakala esivunguvungwini…Qhubeka ukufunda →